Blockchain Izindaba 25 Januwari 2018 - Blockchain Izindaba
Blockchain Izindaba 25 Januwari 2018
uhulumeni Indonesian ukutadisha kuwusizo Bitcoin BakaJehova njengenhlangano utshalomali
Uhulumeni Indonesian libona ukusetshenziswa Bitcoin BakaJehova njengenhlangano ithuluzi utshalomali, Futures Exchange Supervisory IBhodi Ministry Trade sika (Bappebti) akushilo.
"Ukusebenzisa Bitcoin njengoba lokukhokha akuvunyelwe, kodwa indlela mayelana nokusebenzisa ke njengoba i-instrument utshalomali? Ingabe lokhu akuvumelekile noma cha?"Bappebti ikhanda Bachrul Chairi ngoLwesibili e Jakarta, njengoba kusho umbiko we kompas.com.
Indonesian Law Cha. 7/2011 lwemali kusho Rupiah uwukuphela olusemthethweni kuthengiselana kanye inkokhelo kuleli zwe.
Bachrul wathi Bappebti uyafundelwa ukusebenzisa Bitcoin njengoba ithuluzi utshalomali. "Ngesifundo, sifuna ukubona ukuthi Bitcoin zingelashwa njengempahla eyigugu digital," uthe.
Market kokuqondisa nokuthuthukiswa bureau ikhanda Dharmayugo hermansyah at Bappebti wathi inhlangano babona amahle kakhulu Bitcoin umkhiqizo zokuhweba.
eceleni, UNgqongqoshe wezeziMali Sri Mulyani Indrawati wathi akekho isiqondiso kuleli zwe kungavunyelwe izakhamuzi zayo kusukela imali cryptocurrency. "Kukithi abantu ukusebenzisa Bitcoin njengoba ithuluzi utshalomali,"Usho wagcizelela.
Okokuqala Bitcoin yizimpahla idili uyisa kakolweni eRussia kuya Turkey
Cryptocurrencies kuthiwa uyangena ukudla lezimpahla zokuhweba.
Eyokuqala yizimpahla idili bazinza Bitcoin wabulawa ngenyanga edlule womkhumbi ethwele ukolweni shipper phezulu eRussia Turkey, ngokuvumelana Prime Ukuthumela Foundation, ibhizinisi ngemuva kuthengiselana.
Maphilisi wawuyingxenye umshayeli ukuhlolwa wesistimu blockchain yokukhokha Prime Shipping Foundation semphahla ngobuningi, wathi isiKhulu esiPhezulu esiPhethe Ivan Vikulov.
I ileja ezisekelwe ezobuchwepheshe kuzokwenza ukucubungula ngokushesha kwenkokhelo kanye ukuguqulwa ku futhi aphume cryptocurrencies, ngokuvumelana inkampani, ubudlelwano phakathi Gibraltar ezisekelwe Ikhoramu Capital Ltd. futhi umkhumbi nomdayisi Interchart LLC. Iqembu futhi uhlela ukwakha lwemali ayo digital.
CEO of ebhange elikhulu waseRussia: Cryptocurrencies akufanele uvinjelwe
Onethonya Russian umnikazi Herman Gref, inhloko Sberbank, usephinde waqinisekisa isikhundla sakhe ukumelana ukuvinjelwa of cryptocurrencies.
iziphathimandla zaseRussia nezikhulu zezimali kufanele ukubekezelela cryptocurrencies nobuchwepheshe blockchain, Russian News Agency tass ucaphuna CEO Sberbank Herman Gref njengoba esho. I umnikazi laqhubekela phambili, egcizelela ukuthi cryptocurrencies kusasele ukuba liqondwe futhi noma yimuphi umthethonqubo kufanele kuhlaziywe futhi kubhekwa, hhayi mva.
Gref wathi “it [crypotocurrencies] akufanele uvinjelwe, njengoba ubuchwepheshe ezintsha ekuthuthukiseni, okungekho muntu usengowesikhathi ukwamukela izinkolelo ezingaqondakali.”
Phakathi no-2016, kwezinhlansi ezezimali inkonzo Russian sika (kwehlulekile) ukuzama ukwethula bill bitcoin ukuvinjelwa izigebengu Bitcoin Abokuqala, Gref obala wakhuluma ubambe esincane bitcoin futhi bemelene umthethosivivinywa. Ngaleso sikhathi, inkonzo zezimali waseRussia ezihlongozwayo ejele kuze kube 7 iminyaka bitcoin Abokuqala.
Brisbane Airport ukwamukela Bitcoin
Brisbane Isikhumulo sezindiza uye uphawu ngokwawo njengohlobo lwemali digital sezindiza friendly wokuqala emhlabeni.
Isikhumulo sezindiza Aussie ihlangene ne eziningi abathengisi kanye TravelbyBit. Abavakashi maduzane bazokwazi ukusebenzisa cryptocurrency yokukhokhelana TravelbyBit sika, okuhlanganisa Bitcoin nezinye zezimali digital, nokudlela bese uthenga at eminingi ezitolo ezahlukene ngaphesheya kokubili ezikhumulweni.
Ukubambisana kuqinisa inhloso Brisbane Airport ukusekela amabhizinisi endawo, sithuthukise isipiliyoni umgibeli, futhi ube umholi e sezindiza digital emisha isikhala.
Kusukela sezindiza zokuhamba Ihhotela Lebukhatikhati kuhlala, nokudla nokuzijabulisa zemicimbi e Brisbane sika amandla Valley, Brisbane iye rebranded ngu bendawo njengoba 'Crypto Valley' njengoba kungabantu abangaphezulu kuka 20 abathengisi endaweni manje ukuthatha lwemali izinkokhelo digital.
uKalebi Yeoh, CEO TravelbyBit, wathi "Noma nini uvakasha kwezilwandle une ukubhekana lwemali oluningi futhi awazi ukuthi yini exchange rate amabhange kuthiwa kokukukhokhisa. Lapha e-TravelbyBit thina lithuthukisa Bitcoin travel ukunyakaza. lwemali Digital esihamba emhlabeni wonke. Kulula, ephephile futhi azikho izindleko zasebhange,"Mr Yeoh wathi.
Stock yokuhweba lokusebenza Robinhood ukuqalisa Bitcoin & ukuhweba Ethereum
Amakhasimende e-California, Massachusetts, Missouri, Montana futhi New Hampshire uzokwazi ukudayisa bitcoin futhi ethereum ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza kusukela ngo-February, Robinhood imemezele ngoLwesine. Okwamanje, manje wonke amakhasimende ungakwazi ukulandelela amanani kanye ukuthola izaziso 16 cryptocurrencies kuhlelo lokusebenza.
Robinhood umkhankaso cishe iminyaka eyisithupha edlule njengendlela amakhasimende, zimali ikakhulukazi abasebasha, ukuba ahwebe ngamasheya ngokusebenzisa Smartphones zabo mahhala. Robinhood Ubuye premium ikhokhwe isevisi, futhi ngo-December umkhankaso ongakhetha zokuhweba. Le nkampani manje njalo seliphindeke izikhathi ezingaphezu 3 ayizigidi, nge 78 amaphesenti ukuwela okuthiwa Kweminyaka yobudala isigaba 18 ukuze 35 ubudala.
Ukuze cryptocurrency zokuhweba, Robinhood ngeke kube ubuncane utshalomali noma ngobukhulu, futhi ngaphandle komkhawulo ukuhoxiswa. Ukuqala-up izobamba iningi zemali digital ngaphandle kwe-intanethi kulokho okubizwa ngokuthi indawo ebanda. Umkhuba kuvimbela kubaduni kusukela ezeba zemali.
Robotrading noma Ukuhweba imanuwali
Blockchain Izindaba 05.07.2018
Blockchain Izindaba 24.08.2018
amaqembu Bittrex ne-t ...
Thumela Previous:Inkokhelo opharetha Umugqa enqaba Bitcoin
Thumela Landelayo:Kuvele ukuhlaselwa kuhlonyiwe obenziwe kwi-Canadian Crypto Exchange